प्रवास Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
बस्तीको बीचमा फराकिलो बाटो । नजिकै नेपाल–भारत सीमा छुट्ट्याउने ११२ नम्बरको जंगे पिलर । बाटो पश्चिमतिर भारतीय बस्ती र पूर्वतर्फ नेपाली बस्ती । नेपालतिर अलिक व्यवस्थित बस्ती छन् भने भारततिर फुसले बारे...
जयशंकरको व्यक्तित्वबारे नेपालमा पुन: बहस शुरु
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा बिहीबार एक परिचित, तर गैर–राजनीतिक अनुहार देखा परे  । धेरै आश्चर्यचकित हुने गरी पूर्वविदेश सचिव डा. सुब्रमण्यम जयशंकरले १४औँ वरीयताको मन्त्रीको ...
ओली–मोदी भेट: दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध थप विस्तार गरिने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भेट गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली पुग...
जानकी मन्दिरको नाममा भारतको मोहनपुरमा रहेको १५१ बिघा जग्गा गायब
जानकी मन्दिरको नाममा नेपालमा रहेका जग्गा अतिक्रमणमा परेको घटना सार्वजनिक भएसँगै मन्दिरको नाममा भारतमा रहेको जग्गासमेत गायब भएको पाइएको छ । जानकी मन्दिरको नाममा भारतको मोहनपुरमा रहेको १५१ बिघा...
एस-400 मिसाइलको कारण ‘अमेरिका-भारत सम्बन्ध’ तनावमा !
नयाँ दिल्ली । अमेरिकाको ह्वाइट हाउस स्थित ट्रम्प प्रशाशनले भारतको रक्षा प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । रुसबाट मिसाइल रक्षा प्रणाली ‘एस-400' खरिद गर्ने भारतको फैसला पश्चात अमेरिकाले भारतक...
बीबीसी । दिल्लीको कोनट प्लेसस्थित मरीना होटलको ठ्याक्कै अगाडि एउटा मस्जिदमा मगरिबको नमाज शुरु हुन लागेको छ । रमजानको महिना छ । केही समयपछि रोजा खोलिने छ अर्थात् व्रत समापन गरिने छ । मरीना होटलको एउटा ...
नरेन्द्र मोदीले हिजो(बिहिबार) भारतको १५ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेका छन् । बिहिबार बेलुका राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति कोविन्दले प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीमण्डलका ५७ सहय...
‘मेरा श्रीमानले मोदी जीको जीतका लागि आफ्नो बलिदान दिएका छन् ।’- आरती देवी
एजेन्सी । ‘मेरा श्रीमानले मोदी जीको जीतका लागि आफ्नो बलिदान दिएका छन् । हामीलाई न्याय चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले हामीलाई शपथग्रहण कार्यक्रममा बोलाएका छन्, हामीलाई आशा छ कि हामीले पक्कै न्याय पाउ...
विषादी प्रयोग गरेर पकाइएको भारतीय आँप नेपाली बजारमा
सिरहा । आँपको राजधानी भनिने सिरहामा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक मानिने कार्बाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण भइरहेको भेटिएको छ । भारतको विभिन्न स्थानमा रहेका फलफूलका गोदाममा कार्बाइड प...
मोदीलाई बधाई दिन प्रधानमन्त्री ओली आज भारत जाँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज(बिहिबार) नयाँ दिल्ली जाँदैछन् । भारतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा समारोहमा सहभागी हुन उनी दिल्ली जान लागेका हुन् । मोदीले अघिल्लो कार्यकालको...
“डाक्टरहरु साँझको ५ नबज्दै ‘पोस्टमार्टम प्रक्रिया’ किन बन्द गर्छन् ?”
एजेन्सी । नेपालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिको ‘अप्राकृतिक मृत्यु’ पछि शवको ‘पोस्टमार्टम’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्युको कारण र समय पुष्टि गर्नुका साथै शवको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा पोस्टमार्ट...
मोदीको शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्री ओली सहित बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई निम्तो
एजेन्सी । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार मे ३० मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोश्रो कार्यकालका लागि सपथ लिँदैछन् । दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नि...
एजेन्सी । भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ स्मृति इरानीले आफ्नो सहयोगीको पार्थिव शरीर काँधमा बोकेर एक किलोमिटर टाढा घाटसम्म पुगेकी छन् । अमेठी निर्वाचन क्षेत्रका सहयोगी सुरेन्द्र सिंहको पार्थिव शरीर बोकेर इ...
एजेन्सी । भारत र पाकिस्तानका शीर्ष नेताबीच फोनवार्ता भएको दुई देशका विदेश मन्त्रालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । गत फेब्रअरीमा आणविक शक्ति सम्पन्न परस्पर विरोधी दुई क्षेत्रीय मुलुकबीच भए...
काठमाडौं । भारतको गुजरात राज्यको विद्यार्थीहरुले खचाखच भरिएको एक ट्युसन सेन्टरमा शुक्रबार आगलागी हुँदा कम्तीमा २० विद्यार्थीको ज्यान गएको छ भने २० विद्यार्थी गम्भीर घाइते छन् । ज्यान गुमाउने अधिकांश क...
काठमाडौं । भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक्लैले भारी बहुमत ल्याएको छ । सरकार बनाउनका लागिदुई सय ७२ सिट आवश्यक पर्ने भए पनि भाजपा एक्लैले ३ सय बढी मत ल्याएको छ भने भाजपाको गठबन्...
अत्यधिक बहुमतबाट विजयी भएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई विभिन्न देशका प्रमुखले बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले ट्विट गरेका छन्, ‘मेरा मित्र नरेन्द्र मोदी, प...
जनकपुर । हतियार सहित जनकपुर उपमहानगरपालिका ८ स्थित बिहार कुण्डमन्दिरमा लुटपाट गर्न आएका ८ जना भारतीय डाँका पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा विहार समस्तीपुर जिल्ला सिमरी ८ बस्ने २० वर्षका साहिल र...
एजेन्सी । आज (बिहिबार) भारतीय लोकसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुन लागेको छ । हाल लोकसभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ । ५४३ लोकसभा सिटका लागि ३९ दिन लगाएर सात चरणमा चुनाव भएको निर्वाचनको मतगणना शुरु ...
एजेन्सी । आज (बिहिबार) विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशको भावि सरकार कसको हुने तय हुँदैछ । भारतका ९० करोड मतदातामध्य ६० करोडभन्दा बढीले चुनावमा सहभागीता जनाएका थिए । तिनले हालेको मत भो...